မြစ်ဆုံ: တန်ဖိုးရှိသေားစကားများ 3
Plan for the tomorrow that will never come
ဘယ်တော့မှ ရောက်လာမှာ မဟုတ်တဲ့ မနက်ဖြန် အတွက် စီမံကိန်းချထားပါ။ There is much to be heard fromaclosed mouth. စေ့ထားတဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကြားမှာ မှတ်သားစရာ စကားတွေ ရှိတတ်တယ်။ It is better to know everything, Or to know everyone? အရာအားလုံးကို သိတာနဲ. လူအားလုံးကို သိတာ၊ ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းလဲ။ Discipline brings its own luck. စည်းကမ်းကိုယ်တိုင်က ကံကောင်းခြင်းတွေ သယ်ဆောင်လာလိမ့်မယ်။ Great gaps may be filled with small stones.ချောက်ကမ်းပါးကြီး ဖြစ်ဦးတော့၊ ကျောက်တုံးသေးသေးလေးတွေနဲ. ဖို.နိုင်တယ်။
Begin the job, Then, finish it. စလုပ်ပါ။ ပြီးတော. အဆုံးသတ်ပါ။ It is better to be, than to have once been. “ဖြစ်တာ” က တစ်ခါက ”ဖြစ်ခဲ.ဖူးတာ” ထက် ပိုကောင်းတယ်။ Character is better than wealth. အကျင့်သိက္ခာဟာ စည်းစိမ်ချမ်းသာထက် ပိုကောင်းတယ်။ A fool will not receive praise, andawise man will not receive rebuke.လူမိုက်ဟာ အချီးမွမ်းမခံရ၊ ပညာရှိဟာ အကဲ.ရဲ.မခံရ။ Time diminishes all things - except greed. အချိန်ဟာ အရာအားလုံးကို ကုစားနိုင်ပါတယ်။ “လောဘ” က လွဲလို.ပေါ.။
Posted by မောင်မောင် at 18:06